မနကျဖွနျစနနေမှေ့ာ သီခငျြးအသဈလေးထှကျမယျ့အကွောငျး ပရိသတျတှကေိုသတငျးကောငျးပါးလိုကျတဲ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျ - The Moon MM
မနကျဖွနျစနနေမှေ့ာ သီခငျြးအသဈလေးထှကျမယျ့အကွောငျး ပရိသတျတှကေိုသတငျးကောငျးပါးလိုကျတဲ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျ
စန်ဒီမွငျ့လှငျကတော့ ပရိသတျအခဈြတျောအဆိုတျောတှထေဲကတဈယောကျအပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့သီခငျြးတှကေတော့ လူငယျတှရေဲ့ပါးစပျဖြားမှာရပေနျးစားနရောယူထားပွီး တေးစီးရီးအယျဘမျပေါငျးမြားစှာကိုလညျး ထှကျရှိအောငျမွငျထားတာဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာလညျး စန်ဒီမွငျ့လှငျက ဆိုဖီယာနဲ့အတူ အခှထှေကျဖို့စီဆငျထားတာဖွဈပွီး မလေ(၁)ရကျနမှေ့ာပရိသတျတှအေရှခေ့ပြွဖို့ စီစဉျထားပမေယျ့ ကမ်ဘာကွီးနမေကောငျးဖွဈနတောကွောငျ့ ခဏတာရပျနားထားရတာဖွဈပါတယျ။ ဒီရောဂါကွီးပွီးရငျတော့ ဒီအခှလေေးကို ပရိသတျတှလေကျထဲ အမွနျဆုံးထညျ့ပေးမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
လကျရှိမှာလညျး မနကျဖွနျစနနေမှေ့ာ ပရိသတျတှအေတှကျသီခငျြးအသဈလေးတဈပုဒျကိုခပြွသှားမယျဆိုတဲ့အကွောငျး သူမရဲ့လူမူကှနျရကျမှာရေးသားဖျောပွထားခဲ့ပါတယျ။အဲဒီအကွောငျးလေးကိုတော့ စန်ဒီမွငျ့လှငျက ”မနကျဖွနျစနနေသေီ့ခငျြးအသဈတငျမယျ@jooxကနတေငျပါမယျ”ဆိုပွီးရေးသားထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ ဘာသီခငျြးလေးဖွဈမယျထငျလဲဆိုတာ စောငျ့မြှျောအားပေးလိုကျကွရအောငျနျော….
Source. Sandy Myint Lwin
မနက်ဖြန်စနေနေ့မှာ သီချင်းအသစ်လေးထွက်မယ့်အကြောင်း ပရိသတ်တွေကိုသတင်းကောင်းပါးလိုက်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်အဆိုတော်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားနေရာယူထားပြီး တေးစီးရီးအယ်ဘမ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း ထွက်ရှိအောင်မြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာလည်း စန္ဒီမြင့်လွင်က ဆိုဖီယာနဲ့အတူ အခွေထွက်ဖို့စီဆင်ထားတာဖြစ်ပြီး မေလ(၁)ရက်နေ့မှာပရိသတ်တွေအရှေ့ချပြဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့် ခဏတာရပ်နားထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကြီးပြီးရင်တော့ ဒီအခွေလေးကို ပရိသတ်တွေလက်ထဲ အမြန်ဆုံးထည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း မနက်ဖြန်စနေနေ့မှာ ပရိသတ်တွေအတွက်သီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ကိုချပြသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သူမရဲ့လူမူကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်က ”မနက်ဖြန်စနေနေ့သီချင်းအသစ်တင်မယ်@jooxကနေတင်ပါမယ်”ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ဘာသီချင်းလေးဖြစ်မယ်ထင်လဲဆိုတာ စောင့်မျှော်အားပေးလိုက်ကြရအောင်နော်….
အမညျမသိပရိသတျတဈဦးဆီက မထငျမှတျထားတဲ့လကျဆောငျတှရေလို့ အံသွဝမျးသာနတေဲ့ ထူးအောငျ